Thenga ama-4-Layer Bamboo Fiber Cotton Period Period Esikhathini - Ukuthumela Kwamahhala & Ayikho Intela | WoopShop®
$ 24.99 Intengo ejwayelekile $ 39.99
Usayizi I-4XL XXXL XL L XXL S M
Izingcezu 2pcs 1pc 7pcs 5pcs 3PCS
Okumnyama / 4XL / 2pcs Okumnyama / 4XL / 1pc Okumnyama / XXXL / 7pcs Okumnyama / XXXL / 5pcs Okumnyama / 4XL / 7pcs Okumnyama / 4XL / 5pcs Okumnyama / 4XL / 3PCS Okumnyama / XL / 1pc Okumnyama / L / 7pcs Okumnyama / L / 5pcs Okumnyama / L / 3PCS Okumnyama / XL / 7pcs Okumnyama / XL / 5pcs Okumnyama / XL / 3PCS Okumnyama / XL / 2pcs Okumnyama / XXL / 5pcs Okumnyama / XXL / 3PCS Okumnyama / XXL / 2pcs Okumnyama / XXL / 1pc Okumnyama / XXXL / 3PCS Okumnyama / XXXL / 2pcs Okumnyama / XXXL / 1pc Okumnyama / XXL / 7pcs Okumnyama / S / 5pcs Okumnyama / S / 3PCS Okumnyama / S / 2pcs Okumnyama / S / 1pc Okumnyama / M / 3PCS Okumnyama / M / 2pcs Okumnyama / M / 1pc Okumnyama / S / 7pcs Okumnyama / L / 2pcs Okumnyama / L / 1pc Okumnyama / M / 7pcs Okumnyama / M / 5pcs
I-4-Layer Bamboo Fiber Cotton Period Yesikhathi Esisebenzisekayo - Okumnyama / 4x ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Izinto: Ukotini, i-Spandex, i-Viscose
Inombolo imodeli: QC9081
Ukwakheka Kwento: 100% Ukotini Crotch, 95% Viscose, 5% spandex
Rise Uhlobo: Mid-Rise
Indwangu yeCrotch: Ukotini ongu-100%
Indwangu: I-95% ye-Viscose Bamboo Fiber ethambile
Izici: I-Antibacterial futhi iyasebenza, Asikho isidingo samaphaphu noma ama-tampon enhlanzeko
Isakhiwo sangaphakathi: izingqimba ezi-4 ezivuzayo ezivuzayo zesikhathi sokumunca esindayo
Indwangu ethambile ye-viscose bamboo fiber, i-Healthy crotch crotch.
Akunasidingo samaphaphu noma ama-tampon ahlanzekile, ama-panties asetshenziswayo.
Izendlalelo ezi-4 zesikhathi sokumunca esindayo. Amandla wokumunca acishe alingane namathamponi ama-2. Uma unokuya esikhathini okunzima kakhulu, ungadinga ukusebenzisa iphedi yokuhlanzeka.
Ukumuncwa kwangaphambili nangemuva okulengisiwe nongqimba wokuvuza okuvuza.
Isandla sigeza ngaphansi kwama-degree angama-40.
Izimfanelo eziphezulu zinikela ngosayizi ongenhla ozogwema ukumaka usayizi omningi kakhulu kunambitha yami.
Ngibayalile ngentombazane, mncane kakhulu ukuthi angawagqoka kepha axegile kancane. Ngicabanga ukuthi babaza abancane ngoba bengicabanga ukuthi bazofika ngokukhulu. Ikhwalithi nokuqeda okuhle. I-Repetiremos
Ngiyawathanda la mabhulukwe. Ngakho-ke ithokomele futhi uyigqoke ngokunganaki.